के धर्म, संस्कृति र पहिचान एकै हुन् ? |
के धर्म, संस्कृति र पहिचान एकै हुन् ?
प्रकाशित मिति :2019-07-09 15:25:00
यो लेख एउटा फेसबुकको सानो सकारात्मक स्टाटसको कारणले तयार भएको हो । तर केही अक्षरका खेती गर्ने मित्रहरूले स्टाटसको मूलभूत अर्थ नै नबुझी बिरोध गरेका थिए । जसमा केही आफूलाई धर्मको आदर्श मान्नेहरूले पनि वाहियात भनेर बिरोध गरेका थिए । जुन स्टाटस थियो एक चर्चित अधिवक्ता ‘मोहन साशंकर’ को ।
के धर्म, संस्कृति र पहिचान यी तीनै चीज एकै हुन् ? अथवा फरक–फरक पाटा हुन् ? म त्यतातिर विवादको तोप बनेर पड्किन चाहान्न ।
तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई, कताकता यी तीनै चीज एउटै हो कि भन्ने पो देख्छु म । फरक–फरक धर्म, फरक–फरक संस्कृति र फरक–फरक जातीय पहिचान, भेषभूषा र भाषा ।
साँच्चै भन्ने हो भने, यी फरकै रहेछन् कि क्यारे भन्ने पनि पो लागेर आयो । होइन भने, एउटै देशमा, एउटै राष्ट्रमा विभिन्न धर्म, संस्कृति र पहिचान किन हुनुपरयो ?
धर्म त सम्पूर्ण राष्ट्रलाई मात्रै नभएर पूरै विश्वलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने पो हुनुपर्ने । जसरी कुराअनले गरेको छ । के होइन र ? एउटै धर्म, एउटै जात, एउटै सँस्कृति, एउटै भेषभूषा र एउटै भाषा ।
जसमा ईश्वर पुज्ने एउटै तरिका होस् । जातीय भिवेद नहोस् । उच्च र निच्च न होस् । छोरीको अंश सुनिश्चित गरियोस् । बिधुवाले आफ्नो सहयोगी जीवन साथीसँग विवाह गर्ने कानुनी ऐन होस् । अहिले कानुनी ऐन पाइए पनि बिधुवालाई स्वीकार्ने कोही पुरुष अघि बढ्दैन । किनकि समाजलाई उठ्न वर्षौ लाग्छ । निदाएको समाजलाई उठाउने चौकिदार न भएसम्म कोही जानेर उठ्नै चाहान्न हाम्रो समाजान । यो सर्वबिदितै हो । चाहे क्रान्तिको इतिहास होस् चाहे धर्म क्रान्तिका शास्त्रको इतिहास, त्यसमा अध्ययन गर्दा भेटिन्छन् यस्ता घट्नाहरू बग्रेल्तीसँग ।
कहीँ कुकुर पुज्ने र कहीँ कुकुरकै मासु खाने न होस् । कहीँ गाई पुज्ने र मुत खाने अनि कहीँ गाईकै मासु खाने न होस् । कहीँ सुंगुरलाई हराम भन्ने र कहीँ सुंगुर नै खाने न होस् । कहीँ पतिले सात सातवटी पत्नी ल्याउँदा हुने तर जवान बिधुवाले सेतो र नीरस जीवन काट्न बाध्य न होस् । कहीँ गाईलाई लक्ष्मी माताको रूपमा पुज्ने र भैंसीलाई दूध दिन छाडेपछि ममको लागि मासुमा बेच्ने न होस् । के गाईले दूध दिने र भैँसीले दूधको ठाउँमा पिसाब दिने होर उसलाई घृणा । आहा ! अनि आची खाने कुकुर नै पुज्ने प्रथा । सुनेर बुझेर पनि लाजमर्दो र हाँसो उठ्दो छन् हाम्रा आस्था र विश्वासहरू पनि ।
हामी हिन्दुहरूले मान्छेमा मात्रै होइन, दूध दिने जनावरहरूमा पनि विभेद खडा गरेकै छौं ।
के यी सबै ईश्वर र अल्लाहले लागु गरेका हुन् त ? सती प्रथा कुनकुन राष्ट्रबाट आएको हो ? हामी संसारकै धर्मशास्त्रको अध्ययन गरुम् त । अनि बिचार गरुम् त सती जानेजस्तो घिनलाग्दो र जिउँदै जलाएर विभत्स हत्या गरिने जस्ता प्रथा चरम सीमाका परकाष्ठा नाघेका नियमहरू जसलाई स्वीकार्नु बाध्य हुनुपर्दथ्यो एक समयमा बिधुवा महिलाहरूले ।
के हामीलाई सृष्टि गर्ने ईश्वर र अल्लाहले बनाएका हुन् त यी नियमहरू ? के यति मूर्ख थिए त हामीलाई बनाउने सृष्टि कर्ता, जसले सबैचीज ठिकठिक प्रणालीबाट सृष्टिलाई बनाए । के हामीलाई चलाउने शास्त्र यति गलत तरिकाले लेख्छ त ? के यस्ता प्रश्नहरू किन उब्जियनन् हाम्रा आदर्णिय विद्वानहरूमा ? कि विभिन्न समयकाल र राज्य गर्ने राजाहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि बनाएका हुन् यी सबै वाहियात नियमहरू ?
फेरि किन आए र कसरी आए र कहाँबाट आए विश्वमा नै नभएका नियम ? हिन्दुमै लोग्ने मर्दा सती जानुपर्ने घिनलाग्दो प्रथा । के वेदमा लेखिएको छ र यस्तो नियम र सास्तीको बारेमा ? आज सती प्रथा हटेको कति नै भयो र ? त्यही ९९ वर्ष ? यसो बिचार गर्नोस् त यी चलन, प्रथा, संस्कृति, धर्म, भेषभूषा र भाषा कसले चलाए होला– ईश्वर र अल्लाहरूले ?
मलाइ त प्रश्न गर्न पनि घिन लागेर आउँछ ।
के विभिन्न जातजाती, धर्म र संस्कृतिको लागि अलग धर्ती, आकाश र पानी बनेको छ ? अनि के अलग काल र मृत्यु ? के कहीं देख्नु भो अलग अन्न, पानी, स्वाद, निद्रा र भोकहरू ?
हेर्नोस् त, प्रकृतिका नियमहरू के देखिन्छ, कहीँ उल्टो ? कि छ उल्टो हाम्रो भन्दा फरक ? के बोटबिरुवा, रुख र साग सब्जीहरूले माटोमा जरा नगाडेर आकाशमा जरा हालेका छन् ? कि कहीँ देख्नु भो हाम्रा विद्वानहरूले, सूर्य पश्चिमबाट उदाएर पूर्वमा सूर्यास्त भएको ? के कहीँ देख्नु भो पहाड बगेर अनि समुद्र पहाड भएर उभिएको ? कि देख्नु भो आकाशमा उड्ने चराहरू धर्तीभित्र सुरुङ्ग खनेर लुकेका ।
के देख्नु भएन ए अक्षरका खेती गर्ने र अध्ययन गर्ने विद्वानहरू हो ? कसरी आकाशमा करोडौं ताराहरू मिलेर चम्किएर आनन्द लिईरहेका छन् ? के देख्नु भएन, समुद्रका पानीहरू कसरी एक अर्कामा मिलेर निदाएका छन् ? के देख्नु भएन यहाँहरूले एउटै माटोमा विभिन्न स्वादका फलफूल, तरकारी र अन्नबाली उब्जेका ? के यो प्रकृतिको एउटै नियम छैन र ? र होइन र ?
वास्तवमा, आकाश र पतालको बीच जे जतिछन्, सबै एउटै सृष्टि कर्ताको नै छन् र उसका एउटै नियम, अर्थ छन् र अस्तित्व पनि र सबैका आ–आफ्नै अर्थ छ सृष्टि हुनुको पनि र सबैका जोडी भाले र पोथी । र सबैका वीर्यबाट नै जन्म भएको छ । र जसको जन्म भएको छ उसको मृत्यु निश्चित छ । चाहे सूर्य र पृथ्वीको नै किन न होस् । र यही सत्य हो पनि ।
यदि हामीले सृष्टिलाई नै भगवान मान्ने हो भने, उसको त एउटै नियम रहेछ त फेरि किन हामी र हाम्रोमा अनेकौँ धर्म, संस्कृतिको बारेमा विद्वानका अंकुसे अल्झाई राख्नुपर्यो कि कसो हो ए विद्वान साथीहरू हो ?
के कहिले सुन्नु भएको छ यहाँहरूले, जब्बुर, तौरात र इन्जिल धर्म शास्त्र ? तर जरूर बाइबल सुन्नु भएको होला र पढ्नु पनि भएकै होला । र त्यस्तै अरू पनि कुरआनको बारेमा तर पढ्नु भएको छैन होला । किनभने कुरआन मुसलमानले पढ्ने शास्त्र हो । कहाँ हिन्दुले पढ्नै हुँदैन, पाप लाग्छ । जसले वेदको कुरा गर्छ उसैले पढेका हुँदैनन् ती वेदहरू ।
हामी धर्म, सँस्कृति र पहिचानको लागि झगडा गर्छौ, मर्छौ र मार्छौं त्यसका लागि । तर सबैभन्दा ठूलो हामी एउटा कुरा भुल्छौँ कि हामी धर्म, सँस्कृति र जातजाति भन्दा सबैभन्दा पहिले हामी संसारकै एक मानव हौँ भन्ने कुरा । हामी सनातनका कुरा गर्छौं । पढ्नु होला जब्बुर, तौरात, इन्जिल र कुरआन अनि वेद छर्लङ्गै थाहा हुनेछ सनातन धर्म कुन हो र के हो भनेर ।
एकै टेबुलमा खापमाथि खाप राखिएका वेद, पुराण, जब्बुर, तौरात, इन्जिल, बाइबल र कुरआन मिलेर बस्छ । कहिल्यै उनीहरू एकापसमा लड्दैनन् । तर जसले ती कुनै एक पनि पढेका हुँदैनन् । तिनीहरू धर्मको बारेमा काटमार गरिरहन्छन् । जसलाई धर्म के हो धर्मको ‘ध’ पनि थाहा छैन ।
जबजब धर्म र सँस्कृतिको कुरा आउँछ । हामी विवादमा पर्ने गर्छौं र व्यर्थको झगडा गर्छौ र काट्ने र मार्नेको कुरा गर्छौ । गाईपुज्ने र गाई काट्नेलाई बिरोध गर्छौं ।
यो कुरा सही हो, गाइको मुत पिउनेभन्दा गाईको मासु खानेहरू कयौँ गुणा विद्वान र कर्मठ धर्मी हुन् । जसको धर्ममा एउटै नियम छ र प्रकृतिबासीलाई नै च्यालेन्ज छ एउटै नियमको पालना गर्नु र एउटै इश्वररअल्लाहालाई पूजा इबादत गर्नु भन्ने । जसको शास्त्रमा कहीँ अन्याय नै छैन ।
यो कुरा एकदमै सही हो । कुकुर पुज्नेभन्दा कुकुरको मासु खाने देशका देशबासीहरू धेरै नै विद्वान र देश विकास गरेका छन् । कुरा त सही हो त । उनीहरू आची खाने कुकुरलाई पुज्दैनन् । बरू कुकुरकै मासु खान्छन् । त्यो त मेरो दृष्टिकोणमा कयौँ गुणा श्रेस्कर काम ठान्छु म त ।
आची खाने कुकुरलाई पुज्नुभन्दा त के कुकुरकै मासु खानु राम्रो होइन र । केको यसमा विवाद । गाईलाई पुज्नु र गाइको मुत पिउनुभन्दा त गाइकै मासु खानु के असल होइन र ? हामीलाई पो ठिक न होला किनकि हामी धर्म र सँस्कृतिको साङ्लोले बाँधिएका छौँ । तर जुन देशको शास्त्रमा नै गाई खाँदा हुन्छ भनेर लेखिएको छ र जुन देशको शासकले नै एउटै अल्लाहलाई नै पुजा भनेर आदेश गरिएको छ । फेरि हामीलाई केको आईतबार हँ ?
मात्रै हामीले हामीलाई तौलेर, नापेर र जोखेर हेरम न को कत्तिको पानीमा छ अथवा उचाइँमा छ । केको आफ्नो आङ्मा भैँसी हिँडेको पनि न देख्ने अरूको आङ्मा जुम्रा हिँडेको देख्ने भनेको यही हो ।
हामी गाई खाने र गाईको मुत पिउने र पूजा गर्ने बारेमा र कुकुर खाने र कुकुरलाई पुज्नेको बारेमा झगडी रहन्छौँ सँधै । के कहिले सुन्नु भा’छ यहाँहरूले कुनै ठाउँमा आफ्नै मरेको बाउको मुटु खाने चलन छ भनेर ?
हो, छ । श्रीलंका र भारतको बोर्डर भएको अन्नबार एण्ड निकोबार भन्ने प्रान्तको जङ्गली जातिहरूमा बाउ मरेपछि जेठो छोराले छाती चिरेर मुटु नखाएसम्म त्यो लास दाहा संस्कारको लागि उपयुक्त मानिदैन । अब भन्नुस्, यहाँहरू के त्यो ठिक हो ? विश्वको नै कुनै पनि धर्मानुसार त्यो ठिक हुँदैहोइन भनेर भन्नुहुन्छ यहाँहरू नै । तर उनीहरूलाई त्यो ठिक छ । त्यो उनीहरूको सनातन हो । त्यो उनीहरूको धर्म र संस्कृति हो । अब हामीले बिरोध गरेर भो त, भएन ।
हो, ठिक त्यस्तै भैरहेछ अहिले हामी हिन्दुलाई पनि । हामीलाई कसैले सम्झाउन खोज्यो अथवा हाम्रो भन्दा असल धर्म र सँस्कृतिको बारेमा बुझाउन खोज्यो भने त्यो जस्तो दुश्मन अरू कोही हुँदै हुँदैन । किनकि हामी आफ्नो संस्कृति र धर्मलाई सनातन धर्म मानेर बसेका छौं र सबैभन्दा राम्रो हाम्रै धर्म र सँस्कृति छ भनेर बुझेका छौँ र यही बुझाइएको छ हामीलाई ।
हामी हिन्दुमध्ये नै कोही अलि फरक सोँच र विचार लिएर जन्मियो र हामीलाई हामीले गरेका धर्म, सँस्कृति सबै गलत रहेछ भनेर सिकायो भने उसैलाई नै बिरोध गर्छौ र सके मार्ने कोसिसस पनि गर्छौ ।
तपाईंलाई ठिक लागेको चीज तपाईंकै आफ्नै छोराछोरी, श्रीमती अथवा समाजलाई ठिक नलागेको हुन सक्छ । जे समाजलाई र देशलाई ठिक लाग्छ, त्यो तपाईंलाई ठिक न लागेको पनि हुन सक्छ ।
हामी कहिल्यै अँध्यारो मुर्खको कुवाबाट निस्किएर बाहिरको दुनियाँ बुझ्न र पढ्नै चाहेनौं । के सत्य होइन र ? र यही सत्य हो पनि ।
पढ्नु, लेख्नु र शिक्षित भएर विद्वान हुनु एक फरक पाटो हो । तर थप खोज र अनुसन्धान गरेर समझ्दार हुनु भनेको अर्कै पाटो हो । जहाँ बिरोध छ, त्यहाँ बुझ्ने र खोज्ने गर्नुहोस् जरूर केही न केही भेटिन्छ । जुन गलत छ त्यसलाई तपाईंबाटै डिलिट गर्नुहोस् र बिरोध गर्नुहोस् । शुरुवात सबैभन्दा पहिले आफैबाट शुरु गर्नुहोस् । यही नै हो परिवर्तन युग भनेको । अब मलाई सोध्नु होला यहाँहरूले, के तपाईंले गर्नु भो भनेर ? मैले गरेको छु र यी कुराहरूको अध्ययन पनि गरेको छु ।
गाई र कुकुर खानुमा कुनै गलत देख्दिन म त । तर गाई र कुकुरलाई वर्षको एकचोटी कल्पनाका आधारमा लेखिएका कथाको आधारमा पुज्नु भनेको सरासर गलत देख्छु म त । अझ न बोल्ने मूर्ति पुज्नु त झनै गलत देख्छु म त ।
जजसले मूर्तीको बिरोध गरेर र एउटै ईश्वर पुज्न सिकाउने उनै जिसस, मोसेज, याकुब, आदम, युसुफ, इब्राहिम, नूह, इस्माइल यी सबै रसुललाई भगवान मान्ने संसार कस्तो हुनु ? भो कुरै न गरुम् ।
जुन महादेव आफ्नै श्रीमती बचाउन सक्दैन । उसैसँग आफ्ना दुःख हरणको एक महारथी मान्ने यो हाम्रो देशको कुरै न गरुम् । जुन गणेशले आफ्नै शिर काटिनबाट बचाउन सकेन त्यै देशमा, श्री गणेशाय नमः को मन्त्रको जप हुन्छ । त्यो देशको देशबासी र देशको कस्तो हालत होस्, भो कुरै नगरुम् ।
(यो लेखमा समावेश कुराहरू लेखकका नीजि विचार हुन् ।)